सिन्धु काँग्रेसमा कुन खेमाको कती जना महाधिवेशन प्रतिनिधि ? | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७८ मंसिर १३, सोमबार (५ महिना अघि) ५२ पटक पढिएको
नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनको लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५३ जनाको नाम निर्वाचन मार्फत टुङ्गो लागेको छ । देउवा समुहबाट केन्द्रिय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत र पौडेल समुहबाट जिल्ला सभापति विकास लामाले नेतृत्व गरेको सिन्धुपाल्चोकमा देउवा पक्षको बाहुल्यता देखिएको छ ।
दुइवटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोकमा क्षेत्र नं. १ मा बस्नेत समुहबाट बालकृष्ण बस्नेत प्यानल सहित क्षेत्रीय अध्यक्ष बनेका छन् भने क्षेत्र नं. २ मा लामा समुहबाट प्यानलसहित आइतमान तामाङ अध्यक्ष बनेका छन् । क्षेत्रीय अध्यक्षमा दुवै समुहबाट एकएकजना निर्वाचित भएको भएपनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने संस्थापन पक्ष(देउवा समुह) बाट ३३ जना र संस्थापन इतर(पौडेल समुह) बाट २० जना चुनिएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ मा संस्थापन पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतसहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । सो क्षेत्रबाट संस्थापनइतर पक्षका दोर्जे लामा मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए । क्षेत्रीय सभापति १ सहित २६ जनाले सो क्षेत्रबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा भने संस्थापन इतर पक्षबाट जिल्ला अध्यक्ष विकास लामा सहित १८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । सो क्षेत्रबाट ७ जना संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् ।
यो समिकरण अनुसार काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट ३३ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् भने संस्थापन इतर समुहबाट २० जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् ।